Lönneberga hostel | Shanyira Hultsfred
musha » pokugara » Hostel » Lönneberga hostel
Lönneberga hostel iri kumucheto kweEmil Lönneberga. Lönneberga hostel ine basa rakanaka, zvakasikwa zvakasikwa zviitiko & zviitiko zveese mazera.
Hostel ine mibhedha makumi mashanu nemashanu. Iwo makamuri akashongedzwa ega ega nemabhedha maviri kusvika matanhatu mune yega yega kamuri. Yakagovaniswa chimbuzi, shawa, imba yekutandarira, kicheni uye bhengi.
Muchivanze mune nzvimbo huru dzekuti vana vatambe. Pedyo neSilverån, inoyerera seri kwehostel, iwe unogona kukwereta hoteli inopisa huni uye sauna. Wi-Fi inowanikwa muhotera yese nemutengo wekuwedzera.
Heino runyararo uye padyo nenzvimbo yekugara kweese mazera mutaundi rekwaEmil.
Lönneberga yakavhurika gore rese uye ine magwa ekuroja
Iyo hostel ine magwa ekuroja.
Pakati pekufamba nharaunda inzvimbo diki yemusha yekushambira neSilverån ine diki jecha pamhenderekedzo. Munharaunda yeLönneberga, chitoro chemuvezi chaEmil chinogona kuonekwa.
Muvhuro: 08-19Chipiri: 08-19Chitatu: 08-19China: 08-19Chishanu: 08-19Mugovera: 08-19Svondo: 08-19
3.8 kubva pa5.0
24 wongororo paGoogle
2/5 6 mwedzi yapfuura
Ok. Runako rwakapfekwa. Paive nezvisingaenzaniswi zvepamusoro pakutsvaira mushure mekugara, ini ndaifanira kubhadhara mari yekuchenesa kunyangwe imba yacho yaive yakangochena patakasiya sapatakasvika: /. Uye zvakare, yaive kure kure neresitorendi uye zvinokwezva, kunze kweBulbybyn iyo yaive inotonhorera.
1/5 2 makore apfuura
Iwo makamuri aive akanaka asi imba yekubikira, yepasi uye yemhuri makamuri anga asiri manyowani. Chaizvoizvo chakashata chiitiko chinomutambira, aive akashata uye akatsamwa. Pamusoro pezvo, mari dzisingaenzaniswi dzakabhadhariswa "Kuchenesa kusingatenderwi" kunyangwe isu takatsvaira zvekuti zvainge zvakanaka sepatakuenda uye takazvipira kutsvaira kusvikira zvabvumidzwa asi hazvina kugamuchirwa. Chaizvoizvo usakurudzira kuenda ikoko! Kunzwa senge mugamuchiri anoita zvinhu zvakawanda kuita mari pane zvese!
3/5 2 makore apfuura
Zvakanaka kune husiku humwe chete. Zvimbuzi zvakagovaniswa, imba yekugezera, kicheni, imba yekudyira. Zvichienderana nyowani uye zvakanaka akarara. Shamwari mudiwa! Kune nzvimbo yekutamba kuseri. Kwete wheelchair inowanikwa.
Chero zvaungaita, USASHAYA IZVI! Takatambira invoice yekuchenesa yakaenzana nemari inodhura yekubhadhara imba vanhu makumi mashanu nekuti maive nejecha mumakapeti mumakamuri. Vashandi vasinganzwisisike uye vasina basa chairo. Chero zvaungaita, USATAURA izvi kuitira zviitiko zveboka
Chenjera nzvimbo ino: stale, yakaipa nzvimbo uye muridzi ari kubiridzira vanhu pamari, pasina chikonzero chekutaura.
Nezvikonzero zvakavanzika, Google Mepu inoda mvumo yako kurodha.